Terror Free Somalia Foundation: War Saxaafadeed: Ugaas Ciise oo Cambaareysay Qaraxii ka dhacay Magaalada Dhuusomareeb
War Saxaafadeed: Ugaas Ciise oo Cambaareysay Qaraxii ka dhacay Magaalada Dhuusomareeb
INNAA LILLAAHI WA INAA ILLEYHU
Waxaan tacsi naxdin iyo tiiraanyo leh u direysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed,
Dhamaan Eheladii iyo Reerkii ay ka geeriyooday Xildhibaan Yuusuf Mire Seeraar iyo Xildhibaan C/wali Aw-Muxumed
sheak Maxamad oo maanta
gacan ka gardaran ay qarax argagixiso ah kula beegsatay magaalada
duusamareeb. Ugas ciise ugaas
cabdulle,Ugaaska beesha sade ayaa saxaafada u sheegay
in uu si wayn oga xunyahay qarax foosha xun ee argagixisadu Xagjirka ah kula beegsatay xildhibaano
Aqoonyahno kasoo jeeda gobalka galgaduud .
Ugaas ciise ayaa si toos
ahna u cambaareeyay qaraxaas foosha xun . kaas oo ay dhimisho
iyo dhaawac ka soo gaareen masuuliyeen qaran , aqoonyahno, cuqaal iyo dad rayad
ah . , waxaana EEBBE uga baryayaa inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo, dhammaan
ummadda Soomaaliyeedna Samir iyo IIMAAN ka siiyo, inta dhaawaca ahna ha caafiyo,
Xildhibaan Yuusuf Mire
Seeraar iyo Xildhibaan C/wali Aw-Muxumed ayaa dhinteen qaraxaasi
islamarkaana uu ku dhaawacmay xildhiban xuseen warsame gafarsay.
xiladhibaan general cabdiraxman isaaq biixi, Axmed C/salaam, Dad rayada aha iyo mas’uuliyiin kale.
Ugu danbeyntii, Ugas ciise ugaas cabdulle waxaan ka codsaneynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay u
wada duceeyaan dhamaan dadka ku geeryooday
qaraxa foosha xun ee ka dhacay caasumada gobalka galgaduud
- DHAMMAAD -
Virginia, United States Ugaas Ciise Ugaas Cabdulle Ugaska bari ee beesha Sade Daarood Gobolka
Galgaduud iyo deegaanka puntland
703 401 8292 Posted by